အမှတ်2နွေရာသီ 2017 | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ - မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ အမှတ်2နွေရာသီ 2017
မင်းနွေရာသီမှာပျော်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် TRF ၏ ၀ န်ထမ်းများသည်စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စ၍ ကျောင်းသင်ခန်းစာများ၊ မိသားစုဆရာဝန်များအတွက်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အတူရာသီသစ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၌အလုပ်များနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုရေးသားခြင်း၊ ရန်ပုံငွေလျှောက်ထားခြင်း၊ အစိုးရ၊ ဒေသခံအာဏာပိုင်များ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းများနှင့်မီဒီယာများမှကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကိုရှေ့သို့တိုးတက်ရန်ကူညီနိုင်မည့်လူများစွာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအဆက်အသွယ်များဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှသင့်အားသင့်အားအကြောင်းကြားပေးပါမည်။
ကျွန်တော်တို့ကို Edinburgh အတွက်စကားပြောကိုနားထောငျ
ယင်းဆုကြေး Foundation မှအသစ် strapline
ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် TRF သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစပီကာ ၂ ခုဖြင့် NOTA (ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသူများကုသမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအဖွဲ့) မှတစ်ရက်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပါမောက္ခ Klaus Beier (ပုံ), ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်တစ် ဦး ၏ဗိသုကာပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် Dunkelfeld ကာကွယ်တားဆီးရေးစီမံကိန်း ဂျာမနီမှာ။ ဒုတိယပါမောက္ခ Kieran McCartan, အ Dunkelfeld စီမံကိန်းအတွက်ကနေသင်ခန်းစာတွေကို၏အလငျး၌ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသောအနာဂတ်တုံ့ပြန်မှုစူးစမ်းတဲ့သူ Bristol ကတက္ကသိုလ်မှ criminologist ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပြင်ကိုကြည့်ပါ ဒီမှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Sharpe သည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားတားဆီးရန် 'စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု' ပူးတွဲရေးသားသူဖြစ်သည်။ NOTAအလွဲသုံးစားလုပ်သူများကိုကုသရန်အတွက်အမျိုးသားအဖွဲ့အစည်း။ NOTA သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ဆက်ဆံသောပညာရှင်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသောပရဟိတလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသန၏ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်မေရီသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ Stop Stop Now ၏အမျိုးသားမန်နေဂျာ Stuart Allardyce ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ စကော့တလန်။ ဒီဟာကဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုမင်းမြင်နိုင်တယ် ဒီမှာ.
ငါသည်ဤသတင်းလွှာရွေးချယ်ပါတယ်ပစ္စည်းဟုခေါ်သည် ကလေးများအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု။ ၎င်းကိုအမေရိကန်ကလေးအထူးကုကောလိပ်မှမူဝါဒကြေငြာချက်တစ်ခုအဖြစ် ၂၀၁၆ ဇွန်မှရေးသားခဲ့သည်။
abstraction: အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်လူကြီးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားတွင်နေရာအနှံ့အပြားတွင်ဖြစ်နေသည်။ အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ အပြုအမူနှင့်အကြမ်းဖက်ပြုမူမှု၊ ငယ်စဉ်ကန ဦး လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း၊ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှု၊ ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအန္တရာယ်နှင့်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားဆက်ဆံရေးကိုလွဲမှားစွာရှုမြင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ကလေးများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကွာရှင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုကောလိပ်သည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များအားလူနာများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်ကလေးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများခံစားနေရသောတစ် ဦး ချင်းစီကိုကုသရန်အရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်တိုက်တွန်းထားသည်။
ကျွန်မမိဘများ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များများအတွက်စာအုပ်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ Man, Interrupted - ဘာဖြစ်လို့လူငယ်တွေရုန်းကန်နေရတာလဲ၊ ဘာကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်သလဲ Stanford စိတ်ပညာပါမောက္ခ Philip Zimbardo နှင့် Nikita Coulombe တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပါမောက္ခ Zimbardo ၏အလွန်ကောင်းသော ၄ မိနစ် TED ဟောပြောချက်အပေါ်အခြေခံသည် ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို ငါတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့လူကြိုက်များ TEDx ဆွေးနွေးချက်ဖို့မိတ်ဖက်ဆွေးနွေးချက်ခဲ့သည် မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု.
ဤစာအုပ်၏အဓိကအကြောင်းရင်းကျွန်တော်တစ်ဦး-ဒါ-သတ္တိမဟုတ်ကမ္ဘာသစ်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း; လုလင်တို့သည်ကျန်ရစ်တဲ့ရှိကြသည့်အတွက်ကမ္ဘာ။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အွန်လိုင်း porn တစ်ခုစွဲကို real-ဘဝဆက်ဆံရေးမှမွေးရာပါရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များကိုသွားလာရန်, ရှက်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖယ်ရှားပြီးနှင့်နိုင်ခြင်း (နှင့်ဆန္ဒ) နေသောအန္တရာယ်-ဆိုးရွားသောလုလင်တစ်ဦးမျိုးဆက်ဖန်တီးသည်ဟုဆို , ကျောင်း, နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။ နေရာတိုင်းမိသားစုများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဖြတ်ကြောင်းပြဿနာတစ်ခုမှာတစ်ဦးဝေဖန်ကြည့်ယူခြင်း, လူသား, ကြားဖြတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုလင်တို့သည် arousal စွဲ၏အသစ်တခုပုံစံခံစားနေရပြီးဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာသူတို့ကိုပြန်ရတဲ့အတှကျရဲရင့်သစ်ကိုအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်။
အဆိုပါနိဂုံးချုပ်အခန်းကြီးကျောင်းများ, မိဘ, လုလင်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပါအဝင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ဖြေရှင်းချက်အစုတခုကိုဆက်ကပ်။ ဇာတ်လမ်းများ, ပြောင်းလဲမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သုတေသန, သိနားလည်နိုင်စွမ်း analysis နှင့်ကွန်ကရစ်အကြံပြုချက်များ၏ရလဒ်များကို, လူသား, Interrupt ပြောပြနှင့်ပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်များအတွက်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုများအသိပေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီး, နောက်ဆုံးမှာစိတ်အား။
ဇွန်လမှာတော့ကျနော်တို့ဖြစ်သူ Kenneth Cloggie တစ်ခု Edinburgh အင်တာဗျူး ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒရှေ့ရပျ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုလျှင်မိဘတစ်ဦးနှင့်ကလေးရင်ဆိုင်ရအံ့သောငှါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှင်းပြ။ သူကအင်တာနက်ကိုမှားယွင်း related ပြစ်မှုများအတွက်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ မိမိအအင်တာဗျူးကြောင့်သင်တန်းအတွက်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဇူလိုင်လအတွင်းသြစတြေးလျသွားရောက်လည်ပတ်နေစဉ်ကျနော်တို့ Liz Walker ကတစ်ဦးဦးဆောင်အတူ 45 မိနစ်အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တယ် လိင်ပညာပေး။ Liz ပထမဦးဆုံးအသက်ရုံ6နှစ်ပေါင်းအသက်ကျောင်းကိုဘတ်စ်ကားပေါ်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သည်။ သူမ အကွောငျးအရာ ကောင်းသောစာဖတ်ခြင်းစေသည်။ သူမသည်ယခုအခါမှာလည်းပါမောက္ခ GAIL မှာ Dines Anti-porn စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် ယဉ်ကျေးမှု Reframed.
ဒေါက်တာ Paula BANCA (အောက်တွင်ပုံ), တစ်ဦး neuroscience သုတေသီ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနေသူမအပေါ်ထုတ်ဝေသောသုတေသနစာတမ်းသို့အသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ၂၀၁၆ သုတေသနဆုကိုရရှိသောဤအလွန်ကောင်းမွန်သောသုတေသနကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
နောက်ကျောစကော့တလန်အတွက်ကျနော်တို့အန်း Chilton အတူပဏာမအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တယ်, ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစကော့တလန်နှင့်အတူတိုင်ပင်ဘို့ Professional ကအလေ့အကျင့်၏ဦးခေါင်းကို စကော့တလန်အတွက်လိင်ကုသမှုအတွက်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူရန်။ သူမသည်ယခုအခါစုံတွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်မြင့်တက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လေ့ကျင့်သင်ကြား 30 ပညာရှင်များန်းကျင်ရှိကြ၏ဟုပြောသည်။ သူမသည်ဒီကြီးထွားလာပြဿနာများအတွက်စကော့တလန်အစိုးရအနေဖြင့်လည်းမရှိပုံကိုနည်းနည်းဘဏ္ဍာရေးအကူအညီမှာကြောက်ကြခဲ့သည်။
TRF ပို့ပါလိမ့်မည် ကျောင်းသားမှအတန်း စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်၍ အင်တာနက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏ကျန်းမာရေး၊ ဆက်ဆံရေး၊ ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို Edinburgh အကယ်ဒမီ၊ George Watson နှင့် St. Columba's Kilmacolm ကျောင်းများတွင်လေ့လာခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းစကားပြောလိမ့်မည် မိဘများနှင့်ကျောင်းသား စက်တင်ဘာလအတွက်အကြံပြုချက်များ၏ဂျော့ခ်ျ Watson ရဲ့ပွဲတော်မှာရန် မိဘများ ကျောင်းသား Tonbridge ကျောင်း, လွန်းအောက်တိုဘာလအတွက်အင်္ဂလန်မှာ။
အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်မှာငါတို့ဟောပြောပို့ချပေးပါတယ် Edinburgh ၏ Medico-Chirurgical Society ကဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ။ ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်း 1821 ကတည်းကဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
EH16 41EL သြဂတ်စတင်းယူနီဂင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ၄၁ ဂျော့ခ်ျ ၄ တံတား၊ အက်ဒ်ဘာ့ဂ်၊ EH1 1EL တွင်နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် Edinburgh International ကရေးစင်တာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ သူမသည် "ဝိညာဏ, သနားခြင်းကရုဏာစိတ်နှင့်စွဲ" အပေါ်ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်။ မိဘနှင့်လက်ထောက်ဆရာ Audrey Fairgrieve၊ ဖခင်နှင့်ကျန်းမာရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူဒေါက်ဂလပ်စ်အပါအ ၀ င်အခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Reward Foundation ၏ဥက္ကChair္ဌဖြစ်သူ Darryl Mead မှစပီကာများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။
ကျနော်တို့၏နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ရှေ့နေများတစ်အကွာအဝေးတစ်ခုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပို့ပါလိမ့်မည် လိင်ကျန်းမာရေးတိုးဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း Salt Lake City တွင် 5-7 အောက်တိုဘာလပေါ်မှာ။ ခေါင်းစဉ်ဒီနှစ်ဖြစ်ပါသည် တစ်ဦးဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်လိင်ကျန်းမာရေး.
အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှာငါတို့နှစ်ပတ်လည်စကားပြောမယ် Zagreb, ခရိုအေးရှားအတွက်မိသားစုညီလာခံ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော“ မိသားစု၊ ကျောင်းများ - စွဲလမ်းမှုမှကင်းဝေးရန်သော့ချက်” ကျွန်ုပ်တို့၏အလှူငွေကိုနံနက်ခင်း၌တရားဝင်ဟောပြောပွဲဖြင့်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးနောက်နေ့တွင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက "မေတ္တာ, လိင်နှင့်အင်တာနက်" ကိုက The ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှပြီးနောက် "မေတ္တာနှင့်လိင်ပေါ်မှာငါတို့ဦးနှောက်" မှပြောင်းလဲပြီ။ အဆိုပါအယူအဆဟူသောစကားလုံး "porn" ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲအင်တာနက်အလေးပေးပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေဆဲဦးနှောက်၏အကျိုးကိုသည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. ဩဝါဒပေးအာရုံစိုက်နေကြသည်။ အချို့လူများကဆေးပညာဒါမှမဟုတ် neuroscience ၏ Pre-ရှိပြီးသားအသိပညာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းဖတ်ရှုဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ယုံ, နှုတ်ကပတ်တော်ကို "ဦးနှောက်" နည်းနည်းချပြီးပိတ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအမှုကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။